Ihe nkiri, Nchapu Kechie Ihe nkiri, Ihe nkiri Pallet - Xinzhihui
Gbado anya n’iwu ụdị akara izizi
Guangdong Xinzhihui Packaging Technology Co., Ltd, emi odude ke Dongguan, China. ọ na-ekpuchi 60,000 square meteres. Anyị agafewo afọ iri na isii (site na 2005) na ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa, anyị bụ ndị isi ọkachamara atọ kachasị mepụta ihe nkiri LLDPE Stretch / Pallet Stretch Kechie 100%, na usoro mmepụta 11 na mmepụta 2000T kwa ọnwa. Anyị nwere usoro siri ike iji chịkwaa ogo na ụgwọ, site na ịzụrụ ihe na usoro mmepụta, anyị nwere ike ịnye ndị ahịa anyị niile, ọrụ dị elu, ọkachamara na ịrụ ọrụ nke ọma na-adabere na ahụmịhe anyị bara ọgaranya na ezigbo ọrụ ọrụ. .
Guzosie ike oge
5-oyi akwa co-extrusion technology
1500-2000 Ọnwa / Ton
Mgbatị kechie ihe nkiri na-eme ka ọ dịkwuo mfe mgbe ị na-ebu ngwongwo, na njikwa ahụ nwere ike ịbụ ihe plastik ma ọ bụ ihe mpempe akwụkwọ, ọ ka mma ịkọ obere ihe dịka igbe, akpụkpọ ụkwụ, ọla, eriri wdg.
Ọnụ zọ Factlọ Ọrụ
Mpaghara ngwa ahia
Nwere ike ịtụkwasị Xinhongguanye obi
Mpaghara ngwa ahụ chọrọ nghọta dị elu, obere ike extrusion na ike dị elu; A na-eji 35% nke ihe nkiri gbatia agbatị na pallet dị arọ, nke chọrọ ụfọdụ ike ijigide na nkwụsi ike pallet, ma nwee ụdị anụ ahụ ụfọdụ; A na-eji ihe nkiri 40% na-eme ihe nkiri dị ka uzuzu na mkpuchi mmiri ozuzo na ngwongwo ụlọ brik, nke na-achọ nguzogide mgbapu dị elu na nkwụsi ike akwa. ỌZỌ
Ka ọ dị ugbu a, nnukwu mgbanwe ikike ngwaahịa (0.25 ~ 3.50L) ​​na ụlọ ọrụ ihe ọverageụverageụ nwere nnukwu ihe chọrọ maka nkwụsi ike nkwakọ ngwaahịa na arụmọrụ. Ọtụtụ uru nke eserese nkwakọ ihe nkiri na-eme ka teknụzụ a bụrụ ihe ngwọta kachasị mma maka nkwakọ ngwaahịa na ụlọ ọrụ ihe ọ theụverageụ ihe ọ .ụ .ụ. ỌZỌ
Anụla m ná ndụ m
Ndi oru ime obodo na-eme emume Chi ...
Afọ Ọhụrụ na-eru nso. Iji mee ka ndị agadi nwee mmetụta na-ekpo ọkụ nke nnukwu ezinụlọ, jiri ọchị na ọchị nabata Ememme Oge opupu ihe ubi. N'ehihie nke February 3, ndị S ...
Gbatia film mma nkwakọ effic ...
Ihe nkiri a na-agbatị na-egosipụta ọdịdị dị mfe nke ngwaahịa ahụ, na mmezi nke mbụ na-enye mmezi nke ngwaahịa ahụ. Iji mezuo nzube nke dus ...
M ga-enwe na aka
Ndị otu m na m na-atụ anya ịnụ olu gị.